လောင်ကျွမ်းမှု လုပ်ငန်းအစဉ်တွင် မြင်နိုင်သောမီးတောက်နှင့် ထိန်းချုပ်မှုအနည်းငယ်ဖြင့် ရိုးရှင်းမြင့်မားသော မီးပွားစနစ်
စီးဆင်းမှုစံနှုန်းအဆင့် : 250 မှ 10,000Nm3/h
ဓာတ်ငွေ့မြင့်တင်စက်မှု ဖိအားမြင့်တက်မှု : 150mbarg (အနီးစပ်ဆုံး)
မီးတောက်အပူချိန် : 800 မှ 1,000°C
ထိန်းသိမ်းချိန် : သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိ
လောင်ကျွမ်းစေရန် အနည်းဆုံး မီသိန်းသိပ်သည်းဆ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှု : 20%
AC မီးပွားစနစ်သည် လေဟာပြင်တွင်လောင်ကျွမ်းသော မီးတောက်၏ မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းစနစ်တွင် အခြေခံ၍ ထိန်းချုပ်ပုံစံတစ်ခု ရေးဆွဲထားသည်။ မီးဖို၏ ဒီဇိုင်စနစ်သည် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ပါဝင်သော အလင်းထွက်နှုန်းသည်။ မီးတောက်ငယ်ပေါ်တွင် အခြေခံထားပြီး အခြားမီးဖိုများတွင်သုံးသည့် ရှည်လျားကြာမြင့်စွာ လောင်ကျွမ်းသော အဝေါရောင်မီးတောက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်သည်။
မီးတောက်အပူချိန်သည် 800°C မှ 1000°C အတွင်း ထိန်းချုပ်ထားပြီး မီသိန်းသိပ်သည်းဆ၊ စီးဆင်းမှုအဆင့်နှင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လေထုအခြေအနေပေါ်မူတည်သည်။
Ignition is automatic upon start up and re-ignition upon flame failure will be automatic for an operator adjustable period.
The unit may be run asadispersal and vent station, should gas levels be such that combustion cannot be maintained.
The operator has the further option of running the unit in the "run on" mode. Upon flame failure the unit will attempt re-ignition for an operator set period and then continue running asavent, should re-ignition not be successful.
This latter feature is particularly useful when methane levels are dropping and it is important to keep migration control active regardless of whether combustion is occurring or not.